Welcome to Aayaha Nolosha » XAASKA SARKAAL LA SHEEGAY INUU GACANTIISA ISKU DILAY OO BEENISAY…
June 7, 2019 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Xaaska Sarkaalkii saakay la sheegay in uu isku daldalay Xerada Ciidamada ee xaafada Sheelare degmada Xamamar Jajab ee Gobolkan Banaadir, kaas oo ka tirsanaa Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegtay in seeygeeda uu is daldalin balse la dilay.
Allaha u Naxariistee Meydka Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali Seed ayaa lagu arkay Gudaha Xerada Sheelare, isaga oo qorta uu u suran yahay xarig, isla markaana uu geeriyooday.
Xaaska Marxuumka oo lagu Magacaabo Deeqo Axmed ayaa beenisay wararka sheegaya in sarkaalka uu isbdilay, hayeeshe ay sheegtay inay tuhmeyso in si ula kac ah loo dilay.
Iyada oo Warbaahinta kula hadleysay gudaha Xerada ayaa waxaa ay sheegtay in madaxda ka sareysa ay kusoo wargeliyeen in la duminayo Hoyga ay degan yihiin, isla markaana ay ka guuraan, balse uu u sheegay in uusan garaneyn meel uu aado.
Waxaa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in uu soo wacay Sarkaal ay Magaciisa kusoo koobtay Sulub, kaas oo ay sheegtay in uu ku amray inay Guriga ka guuraan, balse saakay meydka seygeedii lagu arkay Xerada Ciidamada ee Sheelare.